'ठग' कम्पनी लक्ष्मी हुन्डाईका कागजात सरकारी नियन्त्रणमा, मालिक र ब्राण्ड मेनेजरको यस्तो रुवाबासी !
ARCHIVE, INVESTIGATION, SPECIAL » 'ठग' कम्पनी लक्ष्मी हुन्डाईका कागजात सरकारी नियन्त्रणमा, मालिक र ब्राण्ड मेनेजरको यस्तो रुवाबासी !
काठमाडौँ - नेपालको प्रचलित कानुन विपरित नाफा खाएर जनताको पसिना चुस्न पल्किएको ठग कम्पनी लक्ष्मी हुन्डाईमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छापा मारेपछी यो ठग कम्पनीको धन्दा झन् उदांगो भएको छ । कम्पनीले नियम विपरित नाफा खाएर जनतालाई ठग्ने गरेको खबर अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीमाथि उजुरी परेको थियो । सोहि उजुरीका आधारमा कम्पनीको नक्सालस्थित स्वरममा छापा मारी विभागले कम्पनीका सम्पूर्ण कागजात बरामद गरेको छ ।
'लक्ष्मी हुन्डाई विरुद्ध उजुरी परेको थियो । सोहि उजुरीका आधारमा हामीले छापा मारेका हौँ ।' विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, 'खरिद र विक्रीबीचको भिन्नता अत्याधिक भएको उजुरीपछी हामीले कम्पनीको नक्सालस्थित सोरुममा छापा मारेका छौं । कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएका छौं । अनुसन्धान जारी छ। ' अर्थ सरोकार डटकमसंग उनले भने । उनका अनुसार कागजात अध्ययनपछी दोषी ठहरिए कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा कारवाही गरिनेछ । कम्पनीले कसैले पनि आफुलाई केहि पनि गर्न नसक्ने भन्दै पटक पटक घमण्डीपन देखाउने गरेको छ ।
मालिक र मार्केटिङ अफिसरको यस्तो रुवावासी
कम्पनीको शो रुममा विभागले छापा मारेपछि कम्पनीका मालिक अहिले राजनीतिक लवीङमा छन् । यतिसम्मकी अहिले लुटेजसरी जनता लुट्न नपाए आफुहरु बजारमा टिक्नै नसक्ने भन्दै उनले नाडा लगायत केहि व्यापारिक संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई हारगुहार गरेका छन् । यता कम्पनीका सिनियर ब्राण्ड मेनेजर अवशिष ओझा पनि यस विषयमा समाचार प्रकाशन नहोस् भन्दै केहि ठुला मिडियाहरुलाई हार गुहार गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले यतिसम्म गरेका छन् कि आफुले विज्ञापन गरेका केहि संचारमाध्यममा समेत अरु मिडियाहरुमा पनि यसबारे समाचार रोक्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा बुझ्न हामीले लक्ष्मी
हुन्डाईका ब्राण्ड मेनेजर अवशिष ओझालाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर उनले हाम्रो फोन उठाएनन् ।
अर्थ सरोकार डटकमले लक्ष्मी हुन्डाईको ठगी धन्दाको पर्दाफास गरेपछि पछिल्लो समय हुन्डाईको क्रेजनै घटेको छ । कम्पनीका ब्राण्ड मेनेजर अवशिष ओझाले यस अघि नै कम्पनी प्रति जनताको क्रेज घटेको र हुन्डाईका गाडीहरुको विक्री घटेको समेत स्वीकारेका थिए ।